YOUTH DEVELOPMENT NEWS AND ARTICLES
02.12.08FALSAN OO KU DAYASHO MUDAN OO AY MUUJIYEEN DAA’UUD DHEERE IYO AXMADEEY
04.07.08TARTANKA CARUURTA DA’DA YAR EE KUBADDA KOLAYGA SOMALI WEEK MINNESOTA OO LA SOO GABA GABEEYAY
12.06.08KOOXDA DIXON OO HANATAY KOOBKII SOMALI YOUTH BASKETBALL TOURNAMENT EE TORONTO
02.05.08TARTAN KUBADDA KOLEYGA AH EE CARUURTA DA’DOODU KA HOOSAYSO 18 JIR OO LAGU QABTAY MAGAALADA TORONTO
18.04.08DUGSI BARASHADA KUBADDA KOLAYGA AH OO LAGA FURAY MAGAALADA LEICETER
01.04.08TARTANKII KUBADDA KOLAYGA CARUURTA DA’DA YAR EE KA SOCDAY TORONTO OO LA SOO GABA GABEEYAY
29.02.08TARTANKII KUBADDA KOLAYGA CARUURTA DA’DA YAR EE KA SOCDAY TORONTO OO WAREEGII KOOWAAD DHAMAAD YAHAY
03.02.08TARTAN KUBADDA KOLAYGA AH OO KA BILOWDAY TORONTO
30.09.07Wiil yar oo mustaqbal fiican ka leh ciyaaraha Kubadda cagta
Waxaa barnaamijkan wada, Qaar ka mid ah ciyaartooydii hore ee Kubadda Kolayga Soomaaliyeed. Oo ku kala nool Qaaradaha America Canada iyo Europe. Fikradaan oo ka danbaysay kulano sanadeed markiiba lagu qabto wadamada aan kor ku soo xusnay ayaa talaabadii ugu horeysay waxaa ku guulaystay Ciyaartooydii ka socotay wadanka Canada oo wax la taaban karo la soo shir tagay kulankoodii London ay ku yimaadeen in ay uga qayb galaan Tartankii (Somali Basketball Week) oo dhawaan ka furmay London. Waxay noo sheegeen in Ururku uu albaabada u furay cid alla iyo cidii danaynaysa in ay ilmahooda keeni karaan ayna si gacmo furan ugu soo dhawaynayaan, ayagoo noo sheegay in ay ilaa iyo hada iska diiwaan geliyeen caruur tiradoodu gaarayso labaatameeyo.
1.	In laga badbaadiyo caruurtan Qurbaha ku dhalatay dhaqamada foosha xun oo ay ku soo indha furteen kuwaas oo ayna dhaxal u lahayn. Lana baro saaxibka wanaagsan midkuu yahay.
2.	In laga dhiso Maskaxda iyo Jirkaba.
3.	In la baro ixtiraamka Waalidka iyo Walaalka iyo qofkii ka wayn sidii ay ula macaamili lahaayeen.
4.	In la baro lagana soo saaro ciyaartooy Heer Qaran oo mustaqbalka anfacda Qarankii Soomaaliyeed.
Macalin Daa’uud, wuxuu kaloo inoo raaciyay hadalkiisii in ay yihiin urur madax banaan oo aan wax daqli ah aan ku helin Hay’ad ama dowlad midba. Aragtidooduna ma ahayn in ay dhaqaale ku helaan balse ay rabaan in ay ka badbaadiyaan caruurta yar yar ee soo koreysa bannaana wareega, maxaa yeelay isboortiga waa waxa kaliya ee qofka ka leexiya waxyaabaha xun xun. Sidii aan horayba ula soconay, Ciyaartooydii ciyaari jirtay Kubadda Kolayga ayaa waxaa lagu xaman jiray in ay xaga waxbarashada iyo aqlaaqdaba kaga horeeyeen ciyaartooydii kale ee qaybaha kale ee Sportiga Soomaaliyeed. Hadaba waxaan damacsanahay in aan horseed iyo tusaale u noqono da’yartaan soo koreeyso.
Waqtiga Tababarka waa hal maalin wiigiiba, maalinta Sabtida oo keliyah. Saacadu markay tahay 6pm to 10 pm Goobta Tababarkana waa: